It is me. Ko Niknayman.: နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများအမြန်ဆုံးလွှတ်ဆန္ဒပြ။
ယခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရုံးတွင် နှစ် (၆၀) မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပရာတွင် တက်ရောက်သူ (၁၂၀၀) ခန့် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ အပြင် ရုံးချူပ်ရှေ့ တွင် အဖွဲ့ ဝင် (၁၂) ဦးမှ အပေါ်ရောင်တွင် အပြာနုနှင့် အောက်တွင် ပုဆိုးအပြာရင့်ရောင်များဝတ်ဆင်ကာ ကျောနောက်ဘက်တွင် (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများအမြန်ဆုံးလွှတ်) စာလုံးများအား တစ်လုံးချင်းစီ ရေးသားထားကာ ဆန္ဒပြကြပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးခံရမှုသတင်းမရှိသေးပါ။ ဆန္ဒပြမှုကြာမြင့်ချိန်မှာ (၁၅) မိနစ်ခန့် ရှိပါသည်။
Posted by Ko Niknayman at 8:41 PM